Raha ny filazan’ny nanatrimaso, tsy taitra akory ireo jiolahy nony vita ny « opération » teo aimin’ilay « cash point » ny zoma atoandro teo. « Heverina fa efa narahiny avy any ireo mpivady nitondra vola, vantany vao niala ny kodiaran-droa dia tifitra variraraka no nahazo ilay lehilahy. Nalain’ireo jiolahy tsy misaron-tava ny kitapo nitondrana vola ary nandeha an-tongotra niadana tahaka ny olon-drehetra izy ireo nihazo an’Andavamamba. Tsy nisy nahetsika ny manodidina, noho ny hery tsy mitovy», hoy ny renim-pianakaviana iray izay nanatri-maso ny ra latsaka raha sendra nandalo teny an-toerana. Araka ny fampitam-baovaon’ity nanatri-maso ny fanafihana ity, voalaza fa tsy tana ny ain’ilay raim-pianakaviana. Sahiran-tsaina ny olom-pirenena Malagasy ka lasa miraviravy tanana manoloana ny firongatry ny tsy fandriampahalemana. Anisan’ny asa mihatra aman’aina na miteraka risika mantsy ity “cash point” ity satria vola no lalaovina nefa tsy anaty trano arifomba ahitana mpiambina tahaka ireo banky.